Mori Beauty & Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Mori Beauty & Spa | Hlaing
Mori Beauty & Spa ကို အမှတ် ၃/၄ က ၊ကမာရွတ်ဘူတာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် 2009 ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်၏ ၀န်ဆောင်မှုများ အနေဖြင့် ဆံပင် ညှပ် ကောက် လျှော် ပေါင်းတင် ဖြောင့် ဆေးဆိုးခြင်းများ ၊ facial ပေါင်းတင်ခြင်း ဆေးကြောခြင်း ချေးချွတ်ခြင်းများ ၊ nail arts များ ၊ မိတ်ကပ်နှင့် ဆံထုံး၊ ဖယောင်းသွင်းခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ၅၀၀၀ ကျပ်ပြည့်တိုင်း မှတ်သားပေးထားပြီး ၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သွားပါက မျက်နှာပုလဲသွင်းပေးခြင်း တစ်ကြိမ် အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
09:00 AM - 09:00 PM ( ပိတ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
No 3/4A, Kamaryut Train Station Road, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား ကမာရွတ်ဘူတာရုံမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်2မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Mori Beauty & Spa Mori Beauty & Spa is located at No 3/4A, Kamaryut Train Station Road, Hlaing Township, Yangon since 2009. There are numerous kinds of beauty services available for all ladies and gents such as Hair Cuts, perm, straight, color, shampoo and other hair related services, Nail Arts, Make Up and facial treatment services. They use quality products for all services and the prices are reasonable. You are invited to visit to this salon.